Sawirro: Madaxweyne si lama filaana u galay tartan uu ku guulaystay – Warfaafiye:
Sawirro: Madaxweyne si lama filaana u galay tartan uu ku guulaystay
Ali Mohyadin May 17, 2018 0
Madaxweynaha Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, ayaa ku guulaystay tartan caalami ah oo baabuurta ah oo sida muuqata aanu ku talo galin. Waxa wararku sheegeen in uu goobta u tagay si uu ula kulmo mid ka mid ah wasiiradiisa.
Sida uu ku waramay website-ka Fergana, madaxweynuhu waxa uu buuxiyey shuruudhii looga baahnaa ee uu kaga qayb geli lahaa tartanka caalamiga baabuurta ee Hamul-Azar oo baabuurkii uu watay oo ahaa nooca tartannada loogu talo galay oo ah BWM Sports ayaa loogu ogolaaday in uu tartanka kaga qayb galo. Waxa sida la sheegay uu goobta tartanka oo ku taal lama degaanka Karakum u tagay si uu warbixin uga dhegaysto warbixin ku saabsan u diyaar galowga tartanka, wasiirkiisa arimaha gudaha ka dibna waxa uu garsoorihii waydiiyey in loo ogol yahay inuu tartanka ka qayb gali karo iyo in kale.
Garsoorihii ayaa isla markiiba ogolaansho siiyay waxaanu ku yidhi “sharaf wayn bay ii tahay aniga iyo ciyaartoygaba” waxaana sidaa ku waramay website-ka Fergana. Wakaaladda wararka dawladda ee Turkmenistanyn Dowlet Habalar ayaa iyadna ku warantay in Berdimuhmedov oo sidoo kale lagu yaqaan in uu yahay muusigyahan hibo leh iyo sidoo kale nin ku tartama baaskiillada iyo farduhu, uu isla markiiba gaadhigiisii galay oo “uu si sahal ah oo dhakhso badan uga gudbay dhamaan caqabadihii dariiqa tartanka ku go’naa oo uu muujiyey xirfad sugan iyo gacan fudayd”.